Igumbi elithandekayo, elitholakala kahle futhi elikhanyayo i-F1R
Douala, Région du Littoral, i-Cameroon
Ikamelo e-i-guesthouse ibungazwe ngu-Nath
Esakhiweni esivikelekile, igumbi elibukekayo nelikhanyayo emgwaqeni, isitezi sesi-2 esakhiweni esisha sha. Igumbi lihlelwe emgwaqeni okhanya kakhulu. Inekamelo lokulala, indawo yokubeka, nendawo yokulala abantu ababili, ishawa, i-balcony.
Uzoyithokozela indawo yokuhlala yokunethezeka, ukuzola ngokucwebezela kwayo kathathu, indawo, ukusondela kwezikhungo zokuvakasha ezahlukahlukene kuzokwenza ujabulele ngokuphelele umoya ofudumele wobusuku benhloko-dolobha yezomnotho.
Indawo yokuhlala yokunethezeka.
Igumbi elibekwe kahle enhliziyweni ye-arrondissement yesi-3 ku-axis eyinhloko ye-Total Logbaba, eduze nesikhumulo sezindiza sase-Douala kanye nenkundla yezemidlalo yaseJapoma. Ihlelelwe ngokuphelele abahambi ohambweni lwebhizinisi futhi itholakala kahle kubahambi abafisa ukuthutha ngesikhathi sokuhlala kwabo ezindaweni ezivakashelwa kakhulu izivakashi.
Uzozizwa usekhaya ngesikhathi sokuhlala kwakho!
4.59 ·17 okushiwo abanye
Isimo esizolile, eduze nezitolo, izitolo ezinkulu, izindawo zokudlela, isikhungo sobuhle, amabhikawozi, izindawo zokudlela kanye nezokuthutha. Uzobe usekhaya
Indawo yokupaka yamahhala iyatholakala.
Izilimi: English, Français, Deutsch
Hlola ezinye izinketho ezise- Douala namaphethelo